Philippines: Namaly taratasy nalefa tamin’ny alalan’ny facebook ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2010 6:58 GMT
Ny taratasy avy amin'ny pejy Facebook-n'i Reyn Barnido , “Atoa Filoha, misy zavatra tokony hovonoina ao aminao ao,” dia naverin'ny mpikirakira maro navoaka tanaty lahatsoratra tany Philippines. Ary na dia ny Filoha Noynoy Aquino aza dia namaly tamin'ny alalan'ny facebook.
Naparitak'i Barnido ny fahasahiranan-tsainy mikasika ny roa volana tsy nahitam-pahombiazana niasàn'ny governemanta vaovao. Ny teboka niaingany dia ny fakàna an-keriny nivadika ho zava-doza tao Manila tamin'ny volana lasa izay nahafatesana mpizahatany sivy avy any Hong Kong. Naneho ny tsy fankasitrahany an'ireo mpikambana ao amin'ny kabinetran'i Aquino koa izy.
Tsonga iray avy amin'ny taratasy misokatra nataon'i Barnido
Atoa Filoha, tsy hiala avy amin'ny hoe mpitarika mpanohana tsy azo kianina ka hikisaka ho amin'ny toeran'ireo mpanakiana bontolo fotsiny izahay noho izay anton-javatra iray nataona lehilahy iray tsy àry saina. Ny dingana arahanay dia fiofoana naterak'ireo andiana fialantsiny maro sy tsy fifanarahan'ny zavatra nambara sy natao tato anatin'ny roa volana lasa izao. Tsy manome endrika anao ho lehilahy natao hitantana izy ireny; vao mainka aza mampiseho sarina mpiasam-bahoaka tsy mahavita azy, misavoritaka toy ny voalavo ao anaty kombariky ny tranobe iray adedaky ny afo. Ianao no vovonana iadian'ny lohany ifikiran'ireo vondron'olona tsy alehany, izay mihevitra ny fahamendrehana ho ny fandàvana ny fahamarinana, mandra-mpitsingidin'ny iray’ ary mandika ny mangarahara ho famelàna ny gazety sy ny vahoka hitatatata ny zava-misy avy amin'ny vavany tahaka ny trondro mitolona amin'ny farangom-pintana.
Tsy hoe tsy fahalavorariana izany ho an'ny endri-pitantananao; fa io mihitsy no nanjary endrika mamaritra anao.
Na mino ianao na tsia, ireo mpankasitraka anao dia mety hivadika ho mpanakiana, saingy mbola akamanao aloha ry zareo ireo hatramin'ity anio ity. Izaho no iray tsy manary anao Atoa Filoha.
Tsonga iray koa avy amin'ny valinteninì'i Aquino izay navoaka tao amin'ny pejy Facebook-ny ofisialy.
Voalohany indrindra dia misaotra anao aho tamin'ny taratasy nalefanao tao amin'ny Facebook. Ny fomba fijery toy izany avy amin'ny olom-pirenea tomponandraikitra dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fanabeazam-boho ny demokrasia toy ny antsika, izay tokony hitrandràhana ny làlana sy ny teknolojia rehetra mba hampakàrana ny lentan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny daholobe. Kanefa, ny fomba fihevitra aseho amin'ny tranonkala toy ireny, matetika no toy ny vanja mandrehitra ny afo, dia mora miely nefa tsy miaraka amin'izay fankatoavana tena ilaina akory. Izany no antony niheverako fa ilaina ny mamaly ny taratasinao.
Takatro tsara fa betsaka amin'ireo fahasahiranan-tsainao no avy amin'ireo krizy mampalahelo nianjady tamin'ny firenentsika, saingy ny fitantanana ataoko dia tsy voafaritr'io zava-doza io fotsiny ihany. Ilaina ihany koa ny mamaritra azy avy amin'izay efa zava-bitantsika sy izay mbola ho vitantsika amin'ny hoavy.
Ireto ny fanamarihana vitsivitsy avy tao amin'ny Facebook.
Ronald C. Rosas mankalaza ny taratasy “mahafinaritra sy feno fahamarinana” nosoratan'i Barnido
isan'ny niady aho hanohitra ireo fihetseham-po feno rikoriko toy izany, mitodika amin'i pnoy (Avy amin'ny mpanoratra: aleon'i Aquino antsoina hoe PNoy, fanafohezana ny hoe President Noynoy) noho ny tsy fahampian'ny fifehezana sy ny fahosan'ny fitantanany ary tonga dia nahavoa ny anakandriamasony ity indray mitoraka ity. eny, tsy mbola manosi-bohotanana azy aho aloha, fa kosa manantena azy hihetsika miaraka ato ho ato, fa raha tsy izay, dia vao mainka ho henjana sy ho ratsy ny fanakianana avy amin'ireo mpanenjika.
Mankasitraka ny valinteny haingana be avy amin'i Aquino i Cheryl L. Daytec
Mamelom-panantenana ny fahitàna ny Filoha Aquino na ny ekipany manokana fotoana mamaly resaka any anaty FB. Farafahakeliny dia efa mba mihaino ireo vahoaka manara-maso akaiky ry zareo.
Ditas Garchitorena dia mamaritra ny valintenin'i Aquino ho toy ny porofon'ny fangaraharan'ny fitantanana.
Ankehitriny dia io ilay antsointsika hoe fitantanana mangarahara… Misaotra Atoa Filoha amin'ny fahitsianao sy ny fanetren-tenanao. Andriamanitra anie hitahy anao!
Jerome Locson nanamarika ny fomba azon'ny teknolojia anampiana ny olom-pirenena amin'ny fanehoana ny fihetseham-pon'izy ireny
Hitanareo ve izao ny fomba azon'ny teknolojia hanampiana amin'ny famborahana ireo olantsika? Faly fa namaly io hafatra io ny Filoha Aquino.
Peter Paul Carim nanainga ny Filipiana hanam-paharetana miaraka amin'ny governemanta vaovao
Faly aho fa nisokatra amin'ny fanakianana toy itony ny Filoha PNoy ary namaly tamin'ny fomba miabo. Heveriko fa miandry zavatra betsaka amin'ny governemanta isika Filipiana ary miandrandra fanamboarana “eo noho eo” na fiovana. Atreho ny zava-misy ry Pinoys [Avy amin'ny mpandika: enti-milaza ny Filipiana angamba io, toy ny fanafohezana ho Gasy ny hoe Malagasy]. Tsy ao anatin'ny andro na volana vitsy no hisian'izany. Ka andao isika mba hiandry 2 (roa) taona fotsiny araka izay nolazain'i PNoy. Raha tianao hiova ho amin'ny tsara ny firenentsika, na tia ny Filohantsika ianao na tsia, mila mitondra ny anjara-birikinao amin'ny maha-teratanin'ny Repoblikan'ny Filipina anao koa ianao.
Tsy dia taitra loatra i Balatucan na tsy hanohana ela intsony ny filoha aza i Barnido
Mody omena endrika toro-hevitra ho an'ny Filoha ilay fanamarihana. Nefa na dia hosarontsaronana manontolo aza ilay fanamarihana, hita mivandravandra ankehitriny fa famelezana ankolaka ny filoha ilay izy.
Izay izany, raha mahita i Barnido ao anatin'ny roa volana monja fa tampina ny daomy ho an'i Pnoy dia safidy tsara indrindra ny fanesorana azy tsy ho ao anatin'ny ekipa. Ny zavatra tena tadiavina izao dia ny hanànana vahoaka matanjaka. Vahoaka tsy hitofezaka amin'izay marika voalohan'ny ahiahy.
Samy alalinin'i Creed of Goop ny amin'ireo nanoratra sy ny filoha.
Izaho, tena taitra fotsiny (na nialona) fa hoe amin'izao fotoana i Noynoy dia mamaly resak'olona noraisina antsapaka tao amin'ny tranonkala… Tena mino aho, na izany aza, fa mandray am-po ireo fomba fijery i Noynoy ary, mifampitohy amin'izay, hanatsaratsara endrika. Tsy haiko ny tsy hanao safo be mantsina an'ity fihetseham-po ity ho toy ny mariky ny fahosana, amin'ny maha-mpianatra momba ny Psikolojia ahy. Na dia hatao hoe tsy diso loatra aza ny lalan-kevitr'i Reyn, dia mivandravandra koa ny fialokalofan'i Noynoy ao ambanin'ireo fialan-tsiny marobe ireo. Kanefa, tsy manamafy ny fanohanany ny filoha ilay mpitoraka bilaogy. Ny tsy fahampian'ny finiavana mahery vaika no isan'ny endrika iray anànany ilaina vonoina ao aminy.
2 andro izayLaos
Tena mba tsy nampoiziko indray ilay teny hoe farangom-pitana satria azo atao hevitry ny teny tsara fa lelam-pitana manko no nahazatra ahy tamin’izy io…
Ataoko ihany koa fa tsy kisendrasendra no namalian’ny filoha ilay olona fa tena hain’ilay mpanoratra ny nampifantoka ny sain’ny filoha hamaky sy hamaly ny taratasiny. Hevitro ihany aloha izany!
20 Septambra 2010, 14:05
Soratra miverina: « Hono ho’aho Andriamatoa Filoha! tamin’ny fomba Filipiana « GAZETY_ADALADALA
[…] « Hono ho’aho Andriamatoa Filoha! » tamin’ny fomba Filipiana Publié le septembre 23, 2010 par gazetyavylavitra Misy fandaharana iray mandeha izay ao amin’ny RNM rehefa faran’ny herinandro. I Andry Rajoelina no miteny sy mamaly fanontaniana ao amin’izay fotoana izay. Fa efa nisy toa io koa tany aloha. Tenin’ny filoham-pirenena no lohatenin’ilay fandaharana nahenoana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsaroako tampoka ireo fandaharana roa nifanolo ireo raha nijery vaovao avy any Filipina tao amin’ny Global Voices Online M;alagasy aho. Manana ny kaontiny manokana ary amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny Facebook ny Filoha Filipiana izay azon’ny olom-pirenena rehetra ifandraisana aminy (Namaly taratasy nalefa tamin’ny alalan’ny facebook ny Filoha). […]
23 Septambra 2010, 16:43
Soratra miverina: An’iza ny lamba mihaha… « GAZETY_ADALADALA
[…] izahay vahoaka, lazao ny marina ary ataovy ampahi-bemaso sy resaka ifanakalozana. Toy ilay tany Filipina […]
24 Septambra 2010, 08:26